Rooble oo ku baaqay shir deg-deg oo looga arrinsanayo ammaanka Caasimadda - Wardeeq 24 TV Rooble oo ku baaqay shir deg-deg oo looga arrinsanayo ammaanka Caasimadda Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Rooble oo ku baaqay shir deg-deg oo looga arrinsanayo ammaanka Caasimadda
Rooble oo ku baaqay shir deg-deg oo looga arrinsanayo ammaanka Caasimadda
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku baaqay shirka deg-deg ah oo qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan Siyaasiyiinta, Culimada, Odayaasha Dhaqanka, waxgaradka iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ay kaga arrinsanayaan xal u helidda dhibaatooyinka amni ee ka jira Magaalada Muqdisho.
“Waxaan ugu baaqayaa waxgaradka Muqdisho iyo walaalaheen Siyaasiinta Muqdisho ku sugan shir deg-deg ah oo xaaladda lagu dejinayo, loogana arrinsanayo ammaanka.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa ciidamada amniga faray inay suggaan ammaanka bulshada, isla-markaana aanay ku dhex-milmin siyaasadda.
“Ciidamada waxaan ugu baaqayaa in ammaanka muwaadiniinta ay suggaan, siyaasadda aysan ku milmin, kana foggaadaan falkasta oo xasiloonada wax u dhibaya.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Rooble.
Ra’iisal Wasaare Rooble oo kulan la qaatay ururrada bulshada rayidka ayaa xusay in uu ka xun yahay wixii shalay iyo xalay ka dhacay Muqdisho, isagoo tilmaamay sida ay uga go’an tahay in midnimo iyo isku tanaasul lagu wajaho marxaladda taagan, isagoona ammaanay doorka wanaagsan ee ay ka qaadanayaan adkeynta nabadda, horumarka iyo xasilloonida dalka.
Rooble ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay dulqaad muujiyaan, kana qayb qaataan raadinta nabadda, waxaana uu faray ciidamada ammaanka in amniga muwaadiniinta ay suggaan, kana digtoonaadaan fal kasta oo liddi ku ah amniga.
Previous articleWasiirka Amniga oo sheegay in dowladdu aqbashay xabad joojin
Next articleTaliyaha Daraawiishta Galmudug oo magacaabay Saraakiil cusub